Maxaa ka taqaanaa howlgalka Dhireynta Dalka Soomaaliya oo bilowday? – Bandhiga
Maxaa ka taqaanaa howlgalka Dhireynta Dalka Soomaaliya oo bilowday?
Dhalinyaro is xilqaantay oo ku nool dalka dibadiisa ayaa bilaabay barnaamji cusub oo loogu magic daray “Dhireynta Dalka’ ama hawlgalka nabadeed ee Mobile Museum si bilicda magaalada iyo deegaanka u qurxoonaato.
Barnaamijkan ayaa sidoo kale ah mid shaqo looga abuurayo dhalinyarada ku nool dalka waxaana hadda laga bilaabay magaalada Muqdisho iyadoo qorshaha uu yahay in sanadkiiba la talaalo kun geed.
Fursado badan ayaa lagu sheegay in laga helayo dhireynta dalka sida in laga maarmo kaalmada Beesha Caalamka iyo gaajada la soo dirista dadka Soomaaliyeed xiliyada abaarahana waxaa geedaha looga faa’ideysan karaa dhinacyo badan.
Talaalista geedaha badan ayaa ka hortageysa in ay dhacaan masiibooyin dabiici ah iyo kuleelka diirran ee xiliyada qaar jira.
Diin ahaan iyo dhirta
Diinteena suuban ayaa noo sheegeysa in qofkii geed talaalo uu leeyahay ajarka geedkaas xitaa hadii uu dhintay maadaama dad badan ay ku anfacayaan, waxaa kaloo dambi ah in geed la harsado ama miro leh in lajaro ama hoostiisa lagu xaajo guto.
Soomaaliya iyo dhirta.
Waxaan wada ognahay in faa’ido badan leedahay dhirta oo aan u isticmlaano siyaabo kala duwan sida inaan harsanno iyo in dalag ka soobaxa dhirta la beero aan quudano.
Dhirta dhulkeena Soomaaliya aad ayaa loo xaalufinayay tan iyo burburkii dalka taa oo keeni karta nabad guur, waxaana dhowr jeer laga hadlay sida looga hortagi karo in dhirta la jaro, waxaana xusid mudan in dhirta badankeed laga dhigo dhuxul sidoo kalena loo dhoofiyo dalal kale oo dhaca Africa iyo Aasiya.